तास्मानियामा कारले ठक्कर दिँदा एक नेपाली युवाको निधन, शव नेपाल पठाउने तयारी ! « KBC khabar
तास्मानियामा कारले ठक्कर दिँदा एक नेपाली युवाको निधन, शव नेपाल पठाउने तयारी !
१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०४:३४
तास्मानियामा एक नेपाली युवाको सडक दुर्घटनामा निधन भएको छ । काठमाडौं गोदावरी घर भई अष्ट्रेलियामा विगत ४ वर्षदेखि बस्दै आएका सुशान्त सिग्देलको मंगलबार दिउँसो करिब तीन बजे सडक दुर्घटनामा निधन भएको हो । मोटरसाईकलमा सवार सिग्देललाई अर्कोतर्फबाट आएको कारले ठक्कर दिएको थियो ।
होबार्टको बास हाईवेमा मंगलबार दिउँसो दुर्घटनापश्चात प्रहरी पुग्दा सिग्देलको घटनास्थलमै निधन भइसकेको तास्मानिया प्रहरीले जनाएको छ । कारका चालकको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
शवको पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।
सिग्देलले मोटरसाईकलको लाईसेन्स लिनका लागि सिक्दै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भएको बताइएको छ । अष्ट्रेलियामा पछिल्लो समय खाना डेलिभरिका लागि मोटरसाईकल वा स्कुटरको प्रयोग बढ्दो छ । लनर्स लाईसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि पूmल लाईसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१८ मा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आएका सिग्देलले मेलबर्नको फेडरेसन युनिभर्सिटीबाट एकाउन्टींग गरेका थिए । मेलबर्नमा एकाउन्टको पढाईबाट पीआरको सम्भावना नदेखेपछि उनी सन् २०२० मा तास्मानिया मुभ भएका थिए । तास्मानियाको उल्भर्सटनमा बसोबास गर्दै आएका सुशान्तसँगै एउटा नेपाली युवा सपनाको पनि अन्त्य भएको छ ।
नेपालमा रहेका परिवारजनले उनको शवलाई नेपालमै दाहसंस्कार गर्न चाहे बमोजिम एनआरएन तास्मानियाले पहल सुरु गरेको छ । यसका लागि गोफन्डमी मार्फत सहयोग संकलन सुरु गरिएको छ । करिब १२ हजार डलर सहयोग संकलनको लक्ष्यसहित थालिएको यो अभियानमा यदि तपाईं पनि सहयोग गर्न चहनुहुन्छ भने यो लिंकमा गएर आफ्नो सहयोग रकम प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ ।